စပိန် လာလီဂါ က ကလပ် အများစု ဟာ လာလီဂါ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ CVC Investment ထံကနေ ပေါင် ၂.၃ ဘီလီယံ ချေးငွေ ရယူတဲ့ ကိစ္စ အပေါ် သဘောတူခဲ့ကြပြီး ချေးငွေ ကို ကလပ်အသင်း အားလုံး ညီတူညီမျှ ရရှိဖို့ လိုလားကြောင်းလည်း တောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ် ။
MADRID VS LEVANTE. JORNADA4DE LALIGA SANTANDER. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
ဒါပေမယ့် ရီးရဲ မက်ဒရစ် ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဘီဘာအို အသင်းတွေ ကတော့ အဆိုပါ ချေးငွေ ကို ရယူလိုခြင်း မရှိကြဘဲ လာလီဂါ ရဲ့ ရှယ်ယာ ၊ ရုပ်သံ လွှင့်ခွင့် နဲ့ ပုံရိပ်အသုံးချခွင့် တွေကို ချေးငွေ နဲ့ လဲလှယ် ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ချုပ် ကို တရားစွဲဖို့ စီစဉ် နေတယ်လိ့ု သတင်း ရရှိပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ခံလူ ဟိုဆေး ဂျီမီနက်ဇ် ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး ဒီယေဂို ကော်စတာ ကတော့ ဘရာဇီး ပြည်တွင်း ကလပ် အက်သလက်တစ် မင်နဲရိုး အသင်းနဲ့ ၁ ရာသီ ကစားဖို့ စာချုပ် ချုပ်ဆို တော့မယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
၂၀၂၁ တနှစ်လုံး မရပ် မနား ကစား ထားခဲ့တဲ့ စပိန် ကြယ်ပွင့်လေး ပီဒရီ ဟာ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ အပြီး ၅ ရက် အကြာမှာပဲ ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ ရာသီကြို လေ့ကျင့်မှုတွေကို ပြန်လည် ပြုလုပ် ခဲ့ပြီလို့ သတင်း ရရှိပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ ရိုးမား တို့ အကြားမှာ တမ်မီ အေဘရာဟမ် ကို ပေါင် ၃၄ သန်း + ပြန်လည် ခေါ်ယူခွင့် နဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိဖို့ နီးစပ် နေပေမယ့် ကာယကံရှင် ကတော့ အီတလီ ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် UEFA ဟာ လက်ရှိ ကလပ် အသင်းတွေ အပေါ် အသုံးပြု နေတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း ( Financial Fair Play – FFP ) ကို လုပ်ခ လစာ နဲ့ အထူးအခွန် ခံစားခွင့် စည်းမျဉ်းတွေ နဲ့ ပြောင်းလဲ အစားထိုးဖို့ အဆိုပြု ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းဟာ ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် အတွက် ယူရို သန်း ၆၀ + အပိုဆုကြေး တွေနဲ့ တိုးမြှင့် ကမ်းလှမ်း လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ စပိန် ချန်ပီယံ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကလည်း ဗလာဟိုဗစ် ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပြလာခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူရိုပါကွန်းဖရင့် လိဂ် ရဲ့ နောက်ဆုံး အဆင့် ခြေစစ်ပွဲ ကို တက်ရောက် လာနိုင်ခဲ့တဲ့ ထရာဇွန် စပေါ် အသင်းဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ရိုးမား နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂါဗင်ဟို ၊ ဘရူနို ပီရက်ဇ် ၊ ဟမ်ဆစ် တို့ ပါဝင်တဲ့ ထရာဇွန်စပေါ် ဟာ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ မှာ ရိုးမား ကို အိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အကျော့ ကိုတော့ သြဂုတ် ၂၆ ရက်နေ့ မှာ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် အဖြစ် သွားရောက် ကစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် ၊ အဲဗာတန် နဲ့ ဇင်းနစ် တို့ ဟာ နာပိုလီ နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ညှိနှိုင်း မရ ဖြစ်နေတဲ့ အီတလီ တိုက်စစ်မှူး လော်ရန်ဇို အင်ဆစ်ညာ ရဲ့ အေးဂျင့်ကို ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက် ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ အင်ဆစ်ညာ နဲ့ နာပိုလီ တို့ရဲ့ စာချုပ်ဟာ ဒီရာသီအကုန်မှာ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အတ္တလန်တာ တိုက်စစ်မှူး ဒူဗန် ဇာပါတာ ရဲ့ အေးဂျင့် ကတော့ အင်တာမီလန် နဲ့ သတင်းထွက်မှု တွေကို ငြင်းပယ် သွားခဲ့ပြီး ခုချိန်အထိ ဇာပါတာ အတွက် ကမ်းလှမ်းထားမှု လုံး၀ မရှိသေးကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာရှယ် က သူဟာ အခုချိန်အထိ ၁၀၀% မကြံ့ခိုင် သေးပဲ အပြည့်အ၀ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာဖို့ အတွက် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် လိုအပ် နေပါသေးတယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။